250 000 daozy ho tonga ny zoma izao…: hanomboka ny alatsinainy izao ny fanaovam-baksiny Covishield | NewsMada
Par Taratra sur 05/05/2021
Hisitraka voalohany ity vaksiny Covshield ity ireo sokajin’olona voafantina, araka ny efa nanambaran’ny filoham-pirenena azy. Hanomboka avy hatrany amin’ny herinandro ny fanaovana izany vaksiny fanefitry ny Covid-19 izany…
Tsy nivaona amin’ny efa nambarany ny filoha fa higadona ny zoma 7 mey izao eto Madagasikara ny vaksiny CoviShield miisa 250 000 daozy nohafaran’ny fitondrana malagasy, hiadiana amin’ny valanaretina Covid-19. Nohamafisiny nandritra ny fitokanana ny CTC-19 vaovao, ao Vatofotsy, Antsirabe, ny vaovao mikasika izany.
Anisan’ny lohalaharana hisitraka ity vaksiny ity ireo mpiasan’ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana ary ireo lazaina hoe « olona marefo ». Mikasika ireto farany, voalaza fa ny Andia Malagasy Miady amin’ny Diabeta (Amadia) no hamoaka ny lisitr’izy ireo. Efa fantatra ihany koa izao ny andro hanombohana ny fanaovam-baksiny, ny alatsinainy 10 mey izao.
Efa nahazo fankatoavana…
Marihina fa efa nankatoavin’ny komity siantifika malagasy, amin’ny alalan’ny Akademiam-pirenena malagasy (Anamem) misahana ny fitsaboana, ity vaksiny CoviShield, atsindrona indroa ity.
Ankoatra iretsy karazan’olona nofantenina manokana, antsoina koa ireo mpilatsaka an-tsitrapo maniry hatao ity vaksiny ity hisoratra anarana eny anivon’ny fokontany misy azy ireo avy. Hanomboka ny alarobia 19 mey izao kosa no hanaovam-baksiny azy ireo.